Home » Lahatsoratra farany farany » Hostpost » Ahoana ny fomba hanomanana sy hizaha toetra ny fitaovana ho an'ny fihazana any ivelany?
Ny olona mihaza matetika dia efa mahafantatra ny maha-saikatra azy, na izany aza, ny fihazana eny an-tendrombohitra lavitra ny vahoaka dia mety ho sahy kokoa. Mitaky tanjaka sy faharetana be ny fihazana any an-dafin'ny tany mba hamenoana ny lalao nofinofinao. Fanampin'izany, mitaky ny mpihaza ihany koa ny manapa-kevitra raha te hanao kitapo, handeha miaraka amin'ny ampondra na soavaly na hamindra ny tobiny amin'ny toerana iray mankany amin'ny iray hafa. Na dia toa mampatahotra aza izany rehetra izany, dia afaka manome traikefa sy fahatsiarovana tsy hay hadinoina ho ankamamianao. Noho izany, ity torolàlana feno ity dia hanazava aminao ny fomba hanomanana sy hitsapana ny fitaovana fihazana any an-tanindrazana. Tohizo ny famakiana!
Manomana ny fitaovana fihazana any an-tanindrazanao
Mety ho sahirana ianao amin'izao fotoana izao ary mety hieritreritra fa mila mitondra ny entana rehetra miaraka aminao eny an-tendrombohitra ianao. Tena tsy izany no izy. Misy zavatra vitsivitsy tena ilaina mba hahombiazan'ny dianao. Raiso an-tsoratra ireto fitaovana ilaina ireto:
Rehefa mandeha mihaza any ambanivohitra ianao dia ho namanao akaiky indrindra ny kitaponao, saingy mety ho mifanohitra amin'izany koa izany raha tsy misafidy izay mety aminao ianao. Mila mividy kitapo faran'izay maivana ianao mba hisorohana ny fihenjanana eo amin'ny lamosinao na ny sorokao.
Arakaraka ny maivana ny kitapo kitapo no lafo kokoa. Saingy raha heverinao ho fampiasam-bola tokana izy io, dia mendrika ny vola izany. Tokony ho azonao antoka fa afaka mitondra mora foana ny entanao rehetra izy, noho izany, tsy maintsy manamarina ny fahaizany ianao alohan'ny hividianana.
Tena tsara ny maka kitapo misy efitrefitra sy zipo maromaro mba hahazoana antoka fa afaka maka izay entana tianao mora sy haingana ianao rehefa mihaza.
Ny hafanan'ny andro sy ny alina dia mety hiovaova eny an-tendrombohitra ary mila manangona ny akanjonao mifanaraka amin'izany ianao. Tsara ihany koa ny manamarina ny toetr'andro amin'ny faritra halehanao fa hanampy anao handamina tsara kokoa izany.
Amin'ny ankapobeny, tokony hotadidinao fa tsy tokony vita amin'ny landihazo ny akanjonao, satria mitroka hatsembohana sy hamandoana. Satria ho tsemboka be ianao rehefa mandeha an-tongotra, dia tsara kokoa ny maka polyester na lamba hafa manana toetra mahasosotra.
Tokony hihazona sosona akanjo fanampiny miaraka aminao ianao fa mety hivaingana amin'ny alina. Ho an'ny kiraro dia tsy maintsy mampiasa baoty mateza nefa mahazo aina ary maivana ianao, satria tsy mila blisters amin'ny tongotrao ianao rehefa mandeha an-kilaometatra amin'ny tany tsy mitongilana.
Averina indray, mety hitentina 200 dolara mahery ny kiraro toy izany, saingy mendrika izany. Tokony hohalavirinao ihany koa ny boaty misy rantsan-tongotra satria mametra ny fikorianan'ny rà.
Ny tontolo iainanao matory dia mila aina araka izay azo atao mba hahafahanao mamelona ny vatanao ary afaka mihaza mandritra ny ora maro indray andro ao anatin'ny toe-javatra sarotra.
Rehefa mikasa ny hividy kitapo fatoriana ianao, dia mila mandinika ihany koa ny fitaovana hanaovana azy, satria tokony hahatohitra ny velaran-tendrombohitra.
Ho fanampin'izany, tsara kokoa ny maka kitapo tsy misy rano miaraka amin'ny pad maivana maivana ho an'ny fampiononana ambony indrindra sy ny faharetana.
Rehefa mihaza any amin'ny Tendrombohitra Rocky ianao, dia azo antoka fa tsy te hiakatra mandritra ny adiny roa indray ianao noho ny "heverinao" fa nahita elk goavambe ianao. Izany no antony ilainao manomana ny optic anao koa amin'ny fihazana any an-dafy.
Tena tokony hampiasa vola amin'ny binoculars kalitao avo lenta ianao, satria hamela anao hijery akaiky nefa tsy mandany fotoana sy ezaka. Miaraka amin'izany, ny fampiasam-bola amin'ny rangefinder dia afaka manampy anao hanao kajy ny halavirana, mba hahafahanao manomana ny dianao mifanaraka amin'izany.
Ireo entana roa ireo dia tsy haka toerana be ao anaty kitaponao, ary tsy dia mavesatra loatra koa. Na izany aza, raha heverinao fa ilaina ny maka sehatra miaraka aminao, dia tokony hotadidinao fa mety ho mavesatra izany. Noho izany, raha miaraka amin'ny vondrona ianao na miaraka amin'ny mpiara-mihaza, dia mety kokoa ny mizara izany.
Fanandramana fitaovana fihazana any an-tanindrazanao
Betsaka ny traikefa niainana niaraka tamin'ny mpihaza rehefa mahazo ny fitaovana kilasy voalohany amin'ny diany lehibe izy ireo ary miafara amin'ny fitaovam-piadiana simba rehefa mihaza. Mety ho traikefa tsy mahafinaritra izany, noho izany, tsy maintsy mitsapa tsara ny fitaovanao rehetra alohan'ny handehananao hihaza.
Tokony hojerenao raha mila soloina ny batteran'ny jironao na mandeha tsara ny GPS-nao. Tokony hizaha toetra ny kitaponao koa ianao ary handinika raha mifanaraka tsara amin'ny zava-drehetra izy io, ary afaka mitondra ny lanja tsara ianao. Toy izany koa, tsy maintsy mandinika tsara ny fitaovanao hafa ianao.
Ambonin'izany, tsy maintsy miantoka ihany koa ianao fa ao anatin'ny toe-javatra tsara ny lay misy anao, ary azonao atao ny mitsapa izany amin'ny alàlan'ny fametrahana azy ao an-tokotaninao na mandeha lasy fohy amin'ny faran'ny herinandro miaraka amin'ny namanao. Izany dia ahafahanao manamarina raha mitaky fanoloana na fanamboarana izany, fa tsy manimba ny dianao mihaza any an-dafy.
Nimrah Shiekh hoy:
Janoary 15, 2022 amin'ny 19:55
Miandry ny valin-teninao aho
Misaotra & Salam